Loza teny Soanierana :: Mpitondra môtô voahitsaky ny kamiao • AoRaha
Loza teny Soanierana Mpitondra môtô voahitsaky ny kamiao
Maty tsy tra-drano ny lehilahy iray, 36 taona, mpitondra môtô voahitsaky ny kamiao teny Soanierana, omaly tamin’ny valo ora sy sasany maraina. Kamiao marika « Mercedes Benz » an’ny orinasa Jirama no nanitsaka azy, araka ny fizahana nataon’ny polisy teny an-toerana.
Eo am-pelatanan’ny Borigady misahana ny lozam-pifamoivoizana (BAC) etsy Tsaralalàna ny fanadihadiana. Naterina eny amin’ny tranom-patin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona kosa ny razana, taorian’izay.
Avy eny Anosy nitodidoha ho any Ankadimbahoaka ny môtô « scooter » iray marika « Yamaha jog pro ». Teo aloha niara-dalana taminy ilay fiara lehibe. Tampoka teo, lasa tao amin’ny kodiarana tao aorian’ny kamiao io kodiaran-droa io. Naratra tamin’ny lohany ny mpitondra môtô na dia efa nanao aroloha aza. Io fahavoazana mafy io no tombanana ho nitarika ny fahafatesany teo no ho eo.
Novinavinain’ny polisy nanao ny fizahana ny loza niseho fa « mety ho noho ny fikorisana tamin’ny fijanonana tampoka nataon’ny môtô no nahatonga ny loza, araka ny hita teny an-toerana ». Ny valin’ny fanadihadiana ihany anefa no hamaritana ny tena zava-nisy. Misy ihany koa ny fihainoana an’ireo nanatrimaso ny fomba nisehoan’ny loza, hoy ireo mpanao famotorana.
Fivezivezena an-dranomasina Narahi-maso ny sambo indiana iray tany Masoala
Vono olona tany Maevatananana Miaramila roa fotorana tamin’ny fitifirana lehilahy iray
Fitaterana an-tsokosoko :: Fiara sy kamiao tsy ara-dalàna tratra nitondra mpandeha
Fitsoahana gadra :: Tompon’andraikitra ambony voatonontonona amin’ny fahavakisana fonja